トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ umyinge wenzala Jikelele xa ngokuboleka imali ebhankini
Ukuba uboleke imali evela kumaziko zemali, ngowokuqala ukuza kuya kuba abantu abaninzi bank.
ingqondo yokhuseleko, kuba oko kubonwa nengaphezulu ezifana nemali yabathengi.
Noko ke, ndiya kucela imali ebhankini, nani kwakhona bambalwa aziyo indlela kwenzala ukuba zicocekile. It sazisa ukuba kwiimviwo zokuboleka kunye nomdla yebhanki
ezinxulumene / eziluncedo nezingeloncedo sakho
ukuboleka imali ebhankini
umntu wokuqala ukuboleka imali ukuba
kwimeko abo kuzibolekela imali okokuqala, umyinge wenzala yi izinga lotshintshiselwano kukuba nyaka malunga-4%. Ukuba
abolekwe ukuba omnye ngenyanga 100,000 yen, inzala iya kuba 100,000 yen × 4% × 30/365 = 328 yen.
Okwangoku, irhafu ukusetyenziswa yi-8% kwexesha. Ukuba
isiqingatha oku, ndicinga ephantsi kakhulu, abantu abaninzi baziva.
Ngendlela, xa uqala uboleke imali ngemali kumboleki, malunga-4.5% ku-5%, oko ngexabiso nemakethe.
kuphela, xa kukho utshintsho ngeenxa-1%, nibe nazo abo abacinga ukuyenza hayi ngcono nemali abathengi kukho kwakhona iimviwo umfanekiso kwenzeke nje lula.
Noko ke, ukuba uboleke 100,000 yen phantsi kweemeko ezifanayo, inzala iya kuphuma 369 yen yen 410 kunye umahluko.
oko kukuthi, oku xa imali enkulu, ezifana 300,000 yen kunye 500,000 yen, kwaye akumele kunzima ukuyicinga ukuvula umahluko omkhulu.
Ukuba oyiboleke kunye ukusa kumkhamo othile, ukususela umahluko yale mali iya kuba ngumthwalo omkhulu, ndinicebisa zokuboleka ukusuka eliphantsi yebhanki umyinge wenzala nokuba-1%.
< h2> Ukuba usebenzisa iinkampani eziliqela
ukuba abolekwe kwibhanki ezininzi okanye nemali yabathengi, bakholisa ukuba isixa inzala iphezulu.
Xa ikhadi mboleko yeebhanki ezinkulu, kuba ngumlinganiselo kungenzeka of 14% ukhutshwa isilinganiso eliphezulu. Ukuba elisanda ebolekiweyo
30 million kwaye imali ngomyinge wenzala we yenyanga iya kuba \_ 3.452. umthwalo
nje kuphela, naye kufuneka ke kubalwa imali umdla ukubolekwa kwezinye iinkampani. Abantu abo eboleka e
izigidi zabantu, ukuba unemouse enamaqhosha-14 ekhulwini lenzala, kufuneka ukuba uhlawule inzala ngenyanga \_ 11.506.
Kwimeko indlela yesilayidi intlawulo jikelele, ekubeni isixa semali lahlanganisa kunye nenqununu lunikelwa iintlawulo, nawe umthwalo ngqo sigcinwe bakholelwa ukuba yen 15,000 ukuya 20,000 kwi ubuncinane.
njengoko kwenziwe kakuhle xa uboleka imali, ukuba ndivuze xa likaxakeka kunokuthiwa abantu abaninzi ukuba nzima xa inxalenye yenzala.
Nokuba phantsi intlawulo yenyanga, enyanisweni, akazange abuye umdla kuphela, kuba akukho ngaphantsi libali.
ukuze ukuboleka kwenye ngaphantsi
kwenzala ukunciphisa umthwalo
inzala, kubalulekile ukukhetha inkampani umyinge wenzala eliphantsi. Oko Wathi
, amaqondo enzala ezibhaliweyo kule ntengiso ibhalwe uluhlu olubanzi ukusuka mda eliphezulu ukuya komda omncinci, xa okunene basebenzisa, yaye yintoni boleka kwi naliphi na izinga lenzala andazi, ngaba bambalwa abacinga ixhala . Ukuze ukuthoba inzala
alandelayo imiqathango ebalulekileyo.
ingaba kukho ingeniso ozinzileyo
umntu kuba ixesha lokuboleka lokuqala, ukuze uthathe ithuba bathobe inzala, kubalulekile ukuba ufumana ingeniso ethile ngcembe.
Kakade ke, phezulu ukuba afumane ingeniso ngonyaka, kukuba kubalulekile kodwa iye yaba iikhrayitheriya ixabiso ebalulekileyo iibhanki kukuba "Ukuba abantu ukubuyela kakuhle, kude ekuhambeni kwexesha."
okanye ukuboleka ekuyiwa kungakanani kukho of
kukho ezininzi ukuboleka, bakholisa ukuba nyhani inzala iphezulu.
Ngenxa yoko, indlela ofuna ingqalelo kunciphise le kuyo ukuboleka.
kuwe ukudityaniswa kwetyala ukuba awele kolu didi, kodwa Xa unayo enye amaziko zemali ephantsi umdla bank izinga ukuba ukuboleka, kuya kukhokelela ekunciphiseni intlawulo ekugqibeleni. Ukususela kulawulo lomngcipheko uba lula ukuba sibe kwicala ebhankini
, oko uya zingabolekwa kwi elisezantsi wenzala.
okokuqala uboleke imali ebhankini, umyinge wenzala yi malunga ne-5% ngenxa koko ngemali kubathengi, malunga-4 ekhulwini iya kuba ixabiso nemakethe.
Ngoko ke, nayo ukuze umthwalo debit iphantsi ukuya yamphako, Kuyimfuneko ukuba bacinge malunga nokusetyenziswa bhanki kwindawo yokuqala. Ukuba uthe
, ukuba kungakhathaliseki ngokuqinileyo yindlela ulwazi lwabo ngemali nayo ebhankini, umyinge wenzala Nawuphi kuphela apho iimeko ezilungileyo zigcine nyukela ngasentla.
ukuba, ukuba imeko apho abolekwe kwezinye amaziko ezemali, kwimeko apho ukudityaniswa kwetyala kwakhona ngenjongo ukuqinisekisa ukuba wenze ukhetho oko kuluncedo kakhulu omnye komnye. Xa
esisikhupheli sokuxhaphakileyo, ngale ndlela, "okanye ibolekwe lula" nje "okanye intlawulo lula, inzala uvaleke okanye ephantsi" kukuba sicinga kubalulekile.
kwimeko yomntu na iphindaphindeke yokuboleka, bakholisa ukuba nyhani inzala iphezulu.
Ixesha lokuqala uboleke imali kwi
Bank, xa kwimeko yezezimali nkonzo ukuba ngomyinge wenzala we malunga ne-5%, malunga ne-4%, kuya kuba ixabiso nemakethe.